Kulankii Maanta ee Xildhibaanada Golaha Shacabka oo hal ariin loo baajiyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 29 March 2021
Kulanka xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ee la qorsheeyay in maanta oo Isniin ah ay isugu yimaadaan ayaa dib loo dhigay illaa iyo maalinta Arbacada ah.
Fariinta loo kala diray xildhibaanada Golaha shacabka ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba la joojiyay kulankaasi illaa maalinta Arbacada ee 31ka bishan, kaasi oo Ajendihiisu ahaa Cudurka halista ah ee COVID-19
“Xildhibaan shirkii beri oo Isniin ah ee loo balansanaa waxaa uu dib loo dhigey maalinta Arbacada ee tariikhdu ku beegan tahay 31 March”. ayaa lagu yiri fariinta loo kala diray xildhabaanada Baarlamaanka.
Dib u dhigistan ayaa ka dambeysay kadib markii beesha caalamka ay cadaadis xoog leh ku saareen Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo Guddoonka Golaha.
Kulanka Baarlamanka oo shaki weyn laga qabay in muddo kordhin loogu sameeyo Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa hareeyey diidmo xoog leh oo ka timid midowga musharaxiinta, Beesha caalamka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada.
DEG DEG:-Mas’uul Goor dhow lagu Qarxiyey Muqdisho iyo Khasaaro jira…